Fifidianana FMF: ho fantatra amin’ity herinandro ity ny daty | NewsMada
Fifidianana FMF: ho fantatra amin’ity herinandro ity ny daty
Araka ny fanambarana nataon’ny eo anivon’ny federasiona malagasy ny baolina kitra, hisy ny fihaonana eo amin’ny FMF sy ny minisitera hanapahana ny daty sy ny toerana hanatanterahana ny fifidianana ho mpitantana ny federasiona, amin’izao fiantombohan’ny herinandro ity izao. Fifidianana tokony ho efa natao ny herinandro lasa teo, raha ny lalàna. Raha ny tokony ho izy, araka izany, hivoaka amin’ity herinandro ity ny daty sy toerana hanaovana izay fifidianana izay.
Efa nisy rahateo ny fetr’andro napetraky ny Fifa taorian’ireny disadisa ireny. Nanambara ity farany fa tsy maintsy fantatra mialoha ny 15 desambra izao ny filoha vaovao hitantana ny federasiona malagasy ny baolina kitra, raha ny loharanom-baovao. Raha toa ka mbola mania mandika izany ny mpitantana mpisolo toerana ao amin’ny FMF, hilatsaka ny sazy ho an’i Madagasikara. Tranga mety hiteraka korontana eo amin’ny mpitia baolina kitra malagasy.
Raha tsahivina, hiatrika ny ekipan’i Soudan, ny fiafaran’ity herinandro ity, ihany koa ny Barean’i Madagasikara. Efa manomboka tonga eto an-toerana avokoa ireo mpila ravinahitra mandrafitra ny ekipa malagasy. Mila fanohanana ary indrindra, tsy tokony hisy ny korontana mialoha sy mandritra io lalao io, raha ny nambaran’ireo mpilalao.